Ndiyihlala phi ibhlog yam yendibano?
NgeCawa, uDisemba 9, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
NgoLwesihlanu, emva kwenkomfa yengingqi, bekukho uthungelwano olukhulu kwaye ndabeka imibuzo emininzi.
Ndiza kutyhala umboniso omde kwixesha elizayo, kwaye ndiyathemba ukuba uza kuyenza isebenzisane ngakumbi- kubonakala ngathi kukho umdla omkhulu ovela kumashishini endawo malunga nendlela yokunxibelelana nabantu kunye nokubhloga kunokubanceda ngakumbi kumashishini abo.
Omnye wemibuzo exhaphakileyo malunga nokongeza ibhlog kwindawo yakho yencwadana. Kuqala manditsho ukuba andinakuze ndicebise Misela Indawo yakho yencwadana enemifanekiso ngebhlog- ndiyakholelwa kumandla ophawu, ukuthengisa, kunye nobukho bewebhu obucwangciswe ngokwendalo.
Iinkampani ziya kuhlala zixhamla kongezwe iibhlog zeshishini, nangona izibonelelo (ixesha kunye netalente) zivuma kwaye inkampani ivumela (ukwenza izinto elubala). Umbuzo wendlela ibhlog ebumbeneyo ekufuneka ifakwe ngayo kwiwebhusayithi yequmrhu.
Ngaba kufuneka ndidibanise ibhlog yam kwindawo yam yokudibanisa okanye ndiyibambe kwenye indawo?
Okukwintsusa: Ukudibanisa ibhlog yakho kwiwebhusayithi yakho yokudibanisa kufuna ukuba ugcine ukuthembeka kunye negama lakho. Oko akuthethi ukuba awukwazi ukuqhula okanye ubhale ngokungafihlisiyo… oko kuthetha ukuba abantu baya kunxulumana nomxholo kunye nenkampani yakho kunomsebenzi obhalayo.
Ukubhala kusapho, kwinkolo, okanye kwezopolitiko okanye kulangatye (ukubhala kakubi) ngesihloko esithile kuya kuba nefuthe ngqo kwinkampani yakho. Kuya kufuneka usebenzise ubuchule bokuhlela ukukhusela inkampani okanye uphawu.
Ukuba ibhlog yakho ibanjwe yodwa, ingaphezulu kwegama lomntu kwaye inokubonelela ngenkululeko eyongezelelweyo ngokubhala. Andizukuxelela ukuba ukhethe enye phezu kwenye - kukuwe ukuba unqwenela ukuxela ntoni kuluntu. Ngebhlog yenkampani, kuyakufuneka uqhubeke nokuzibuza, "Ngaba lo ngumyalezo endifuna ukuba inkampani yethu inxulunyaniswe nawo?"
Nazi Injini yokukhangela kunye nezibonelelo zamava omsebenzisi zokwahlula ngokucacileyo ibhlog yakho ngaphakathi kwiwebhusayithi yakho. Abathengi kunye nethemba ngoku baqala ukufundiswa kwiiblogi zeshishini kwaye bazikhangele.
Ukuba wenza uphando lwe "Blog Name Name", ngaba ibhlog yakho yequmrhu iya kuba sisiphumo? Ibhlog yomqeshwa? Ngaba umthengi ongonwabanga? Zama kwaye ubone! Esi sisiphumo sokukhangela ekufuneka (kwaye unokuba lula)
Ndingazidibanisa njani iiBlogs kwindawo yam yeNkampani?
Eyona ndlela ilula yokuseka ibhlog yakho yenkampani inxulumene nenkampani yakho ukuyifumana nokuba yeyiphi ibhlog yangaphantsi okanye isikhombisi esisezantsi. Ukuqaqamba kwe "blog" kwi-URL kuya kuqinisekisa ukuba ikhonjiswe ngokufanelekileyo kwii-Injini zokuKhangela:
Oko kwathiwa, thatha ithuba kwibhlog yakho yenkampani kwiphepha lasekhaya lakho! Andizukubonisa ngokungathandabuzekiyo iiposti zebhlog kwiphepha lakho lasekhaya, endaweni yoko ndingabonisa nje amakhonkco, izicatshulwa ezibhaliweyo, kunye nomfanekiso wombhali ngokugqwesileyo kwiphepha lasekhaya kwindawo yomxholo wayo njengoko izithuba zibhaliwe.
Iinjini zokukhangela azizukusohlwaya (umxholo ophindwe kabini) ngesicatshulwa - kodwa unokufumana inzuzo ngokuqhubeka kokutshintsha umxholo kwiphepha lasekhaya.
Qaphela: Ukongeza ifoto yakho kufanelekile kuyo nayiphi na ibhlog. Inika ngokucacileyo imbonakalo yokuba lo ngumxholo obhalwe ngumntu ongabhaliswanga kwintengiso okanye kwinkqubo yokuhlela yobudlelwane noluntu. Owu ... kwaye nceda uqinisekise ukuba AKUKHO sikripthi sentengiso okanye inkqubo yohlelo lobudlelwane noluntu- akukho mntu uya kunaka xa usenza njalo.
Ungadibanisa isisombululo sasimahla, esivulekileyo njenge WordPress (Isiseko seLinux) okanye an ASP.NET kubloga Isisombululo sayo solawulo 'sebhlog' kunye nedatha kwindawo yakho, kodwa gcina isitayile esingenamthungo ngomxholo wesiko obandakanya isitayile sendawo yakho.
Ukuba ishishini lakho likhulu, uya kufuna ukukhangela Isisombululo sokubloga esidibeneyo ukulawula umxholo kunye nokuququzelela ngokufanelekileyo ubuninzi ukufumaneka ngeenjini zokukhangela.
Ukufunda ngakumbi kuqhubeke UkuBhloga ngokuBumbeneyo:
Kutheni ibhlog? Kutheni kungenjalo iqonga?
Common imibuzo kunye neempendulo zebhlogi.
Ukwenza i- Isicwangciso soShishino lweBlogi.
tags: blogblog eneenkcukachaindawo engezantsi yebhlogkublogaibhanki yenkampaniblog ebumbeneyo
Ngomhla wama-10 ku-Disemba 2007 ngo-11: 12 AM
Iposti enkulu echaza indlela yokuvala umsantsa kwiiwebhusayithi ukuya kwiibhloko. Ndiyavuya ukudibana nawe kuMnyhadala we-MBO!
Ngomhla wama-10 ku-Disemba 2007 ngo-7: 44 PM
Ndinemibuzo emininzi evela kwiinkampani ezahlukeneyo malunga nokongeza ibhlog kwiwebhusayithi yequmrhu, uninzi lwabo luchaphazelekayo malunga nokubhala malunga nalo.
Bhala yonke into! Ibhlog yoshishini inokuba iyonwabisa ... banokubeka imifanekiso ehlekisayo evela eofisini, ukuhleba, iziqhulo njlnjl.
Jonga kwibhlog yeYouTube kwaye uyabona ukuba bathumela yonke into (kwanolwazi olungahambelani neYouTube).
Ngomhla wama-15 ku-Disemba 2007 ngo-9: 04 AM
Esi sigqibo siyingxaki kumashishini amaninzi. Ndisebenzela inkampani enkulu yokupapasha apho uphawu lubaluleke kakhulu kwaye umxholo wokuhlela uyinto yonke. Yonke into yesiqulatho sokuhlela kufuneka ikopi ihlelwe kwaye yamkelwe kwaye ke kube nzima ukwamkela imeko yasimahla yeeblogi. Thina ufuna iibhlog ezidityanisiweyo, kodwa ukwamkelwa kuyekwacotha ngenxa yale micimbi yokufaka uphawu lokudibana kwaye ngenxa yoko zenziwe iibhlog ezimbalwa ezingadibananga. Ngelishwa.